ESI TINYEGHARỊA DIRECTX NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Nweghari ma na-agbakwunye na-efu ihe DirectX components na Windows 10
Maka ndị na-eme egwuregwu na-ahọrọ egwuregwu ọtụtụ egwuregwu, e mepụtala ọtụtụ ngwanrọ olu okwu iji nwee ike ịhazi egwuregwu egwuregwu. N'oge na-adịbeghị anya, netwọk na-ekesa ihe omume dị iche iche, ma anyị ga-elekwasị anya na pụtara. Otu n'ime ha bụ usoro RaidCall.
RaidCall bụ otu n'ime ihe omume kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-egwu egwuregwu. A na-eji ya maka nkwurịta okwu olu na mkparịta ụka mkparịta ụka. N'ebe a, ị nwere ike ịkpọ oku vidiyo ma ọ bụrụ, n'ezie, ịnwere igwefoto vidiyo na-arụ ọrụ. N'adịghị ka Skype, e kere RidCall kpọmkwem maka mmekọrịta onye ọrụ n'oge egwuregwu ahụ.
RaidCall na-agba ọsọ mgbe niile dị ka onye nlekọta. Ya mere, usoro ihe omume ahụ na-enye ikikere ime mgbanwe na usoro. RaidCall ngwa ngwa mgbe mbido mbụ na-ebute mmemme ndị ọzọ, dị ka GameBox na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ izere nke a, mgbe ịmalite usoro ihe omume ahụ, gụọ isiokwu a:
N'ezie, na RaidCall ị nwere ike ịkpọ oku na nkata na ndị enyi gị. Kama, enwere ike ịkpọ ya nkata olu na otu. N'oge egwuregwu ahụ, ọ na-enyere aka ịhazi ọrụ otu na-arụ ọrụ nke ọma. Site n'ụzọ, usoro ihe omume ahụ adịghị arụ ọrụ na usoro ahụ, n'ihi ya ị nwere ike igwu egwu ma ghara ichegbu onwe gị na egwuregwu ga-akwụsịlata.
Na taabụ "Video Show", ị nwere ike ikpo okwu na iji kamera weebụ, ma gụnyekwa mgbasa ozi n'ịntanetị. Dịka olu, njirimara a dị na otu. Ma obughi nani ndi otu, mana nani na akwadoro ya.
Na na RaidCall ị nwere ike ikori n'iji nkwekọrịta agbakwunyere. Na
Site n'enyemaka nke RideCall i nwere ike iziga akwụkwọ gị na onye ọrụ gị. Ma, ọ dị mwute ikwu na usoro mbufe faịlụ na-ewe oge dị ukwuu.
Music mgbasa ozi
Akụkụ ọzọ na-adọrọ mmasị nke usoro ihe omume ahụ bụ ikike ịkwusa egwu na ọwa. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịkwasa ihe niile na-eme na kọmpụta gị.
Otu n'ime atụmatụ nke usoro ihe a bụ ịmepụta otu nke gị (ụlọ maka nkwurịta okwu). Onye ọ bụla na-eji RaidCall nwere ike ịmepụta otu atọ iji kwurịta okwu n'Ịntanet. A na-eme nke a n'ụzọ dị mfe, dị nnọọ pịa "Mepụta Group" na nchịkọta nhọrọ menu, mee njem ya, dịka ọmụmaatụ, "Egwuregwu", ma họrọ site na 1 ruo 4 egwuregwu dị ka otu ụzọ. Ịnwere ike ịgbanwe aha nke otu, na ntọala ị nwere ike igbochi ịnweta otu.
Na RaidCall ọ bụla ọrụ ị nwere ike itinye na blacklist. I nwekwara ike ileghara onye ọrụ ọ bụla n'ime ìgwè anya ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ozi ya.
1. Eji obere ihe oriri nke kọmputa;
2. Ụdị ezigbo ụda;
3. Oge kachasị;
4. Ihe omume ahụ bụ n'efu;
5. Ị nwere ike itinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị so na otu;
1. Nnukwu mgbasa ozi;
2. Ihe isi ike na vidiyo;
RaidCall bụ usoro n'efu maka nkwurịta okwu n'ịntanetị, nke ndị mmepe na-etinye dị ka netwọk mmekọrịta olu. Ihe omume a na-enweta nkwado n'etiti ndị ọrụ n'ihi obere ihe oriri. N'ebe a, ị nwere ike ịkpọ oku na oku vidiyo, nkata ma mepụta otu.
Download RaidCall n'efu
Idozi njehie gburugburu ebe obibi na RaidCall Otu esi eji RaidCall RaidCall anaghị arụ ọrụ. Ihe ị ga-eme Akaụntụ akaụntụ RaidCall
RaidCall bụ usoro n'efu maka nkwurịta okwu olu na Intaneti, nke a na-eji ndị na-egwu egwu eme ihe ma na-enye obere nkwụsị n'oge mkparịta ụka.
Onye Mmepụta: Raidcall